अष्ट्रेलियाबाट नेपाली नर्सको पत्र: आफ्नो जीवन जोखिममा भएतापनि सेवा गर्न पाउँदा गौरवान्वित छु - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाबाट नेपाली नर्सको पत्र: आफ्नो जीवन जोखिममा भएतापनि सेवा गर्न पाउँदा गौरवान्वित छु
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० चैत्र २०७६, आईतवार १४:२४ |
सानैदेखि मेरो नर्स बन्ने सपना थियो । त्यही सपना पूरा गर्ने उद्देश्य सहित अष्ट्रेलिया आइयो । राम्रो सँग पढेर डिग्री हासिल गरी नर्स पनि बनियो । तर यतिमा मात्रै मलाई रोकिनु थिएन । करीअरमा अगाडी बढ्दै एशोशिएट नर्स म्यानेजर बन्न पुगें । आफ्नो प्रगतिसँग धेरै खुसी थियौं म र मेरो परिवार । नहुनु पनि किन, एउटा सरकारी स्कुलमा पढेर विदेशको यूनिर्भसिटीबाट डिग्री हासिल गरेर म्यानेजर लेवलमा पुग्नु म र मेरो परिवारका लागि ठूलो उपलब्धी हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
यहि समयमा आयो यो कोरोना भाइरस , जसले संसारलाई नै हल्लाईरहेको छ । विश्वभरी ठूलै संख्यामा मानविय क्षति भईरहेको छ । कोरोनाकै विश्वव्यापी महामारीमा म आफू रहेको देश अष्ट्रेलिया पनि अछुतो रहन सकेको छैन् । तर अष्ट्रेलिया सरकारले समयमै ध्यान दिएका कारण अन्य देशहरुमा जस्तो संक्रमण फैलने र मृत्यु हुने नागरिकको संख्या ज्यादै कम छ ।
म मेरो पेशा अनुसार आफू कार्यरत हस्पिटलमा फ्रन्ट लाइन वर्करका रुपमा प्रतिदिन कार्यरत रहि आएको छु । फेरी मेरो वार्ड रेस्पीरेटोरी वार्ड, कोरोनाको बिरामी यहि वार्डमा भर्ना गर्ने भयो । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाइ केयर पुगे नपुगेको, उनिहरुको स्वास्थ्य स्थिति, टेस्ट रिपोर्ट के कस्तो आईरहेको छ ? त्यो पनि बुझ्नु पर्ने, नयाँ तालिम र मेडिकल अपडेटको पनि जानकार रहनु पर्ने त मेरो जिम्मेवारी नै हो । जस्तो सुकै अवस्थामा म मेरो पेशाका कारण मानविय सेवामा जिम्मेवार छु र बन्नु पनि पर्छ । र, पनि म मान्छे न हुँ । जब आफू बसेको घरबाट सेवाका लागि अस्पताल जान्छु मेरो मनले सधै भगवान पुकार्ने गर्छ । हे भगवान ! कोरोना संक्रमित भएका विरामी नआउन् है । तर मैले काम गर्ने वार्ड नै रेस्पीरेटोरी वार्ड भएकाले कोरोना संक्रमितको शंका लागेका विरामी नआउने कुरै भएन ।
मलाई त मेरो पेशाले फरक पर्दैन, तर घरमा भएका मेरा , ४ बर्षकी छोरी , १७ महिनाको छोरा अनि मेरो श्रीमान, मेरो दाइलाइ मेरो पेशाको कारणले कोरोना आउने हो कि भन्ने कुराले मेरो मन हरदिन त्रसित हुन्छ । ११ बजे राती म डिउटीबाट आएर घरको ढोका खोल्दा जब मेरी ४ वर्षकी छोरीले ‘ममी’ भनेर अंकमाल गर्न आउँछिन् , मैले ‘छोरी ममीको नजिक नआउ’ भनेर बाथरूमतिर दौड्न्छु । अनि सावरको पानीसँगै मेरा आँखाबाट आँशुको पनि सावर झर्छ । यो कुराले म कैयौं रात निदाउन सकिन । र, पनि मेरो पेशा प्रतिको कर्तव्य पुरा गरि मानविय सेवाका लागि आफूले आफैलाई बलियो बनाएर आफूसंगै काम गर्ने अन्य नर्सहरुलाई सान्त्वना दिएको सम्झन्छु । म लगायतको मेरो टिमले सेवा गरेका बिरामीको सुधार देखेर आन्दित भएको मेरो र मेरा साथीहरुको खुसी भएको पल सम्झिन्छु । घरमा सबैलाइ म ठिक छु, काम ठिक छ भनेर सान्त्वना दिन्छु पनि ।
फेरी अर्को दिनको सिफ्टमा जाने समय आउँछ र मेरो मनले एउटै कुरा सोंच्छ,’ आज कोरोनाको बिरामी होला कि न होला ?
यो त्रसित समय कहिले सकिएला ? यो कोरोनाले यो संसारलाइ कहिले मुक्ति देला ?’। जेसुकै भए पनि आफ्नो पेशा नर्स , फ्रन्टलाइन वर्कर भएकोमा मलाई धेरै खुसी पनि लाग्छ । धेरै बिरामीको जीवनमा सहयोग र उपचारमा थोरै भए पनि आफ्नो योगदान दिन पाएकोमा म आफूलाई धन्य ठान्दछु ।
यहि बिचमा म जन्मिएर हुर्केको देश नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालिसकेको छ । मलाई पनि मेरो देशमा यो विपत्तिका बेला मानविय सेवामा लाग्ने इच्छा भने नभएको होइन् । तर, म आफ्नो केही बाध्यताका कारण मेरो देशलाई हालको अवस्थामा योगदान दिन नपाउँदा मन भने खिन्न छ । कोरोनाले विश्वमै मानवजगतको ज्यान लिइरहेकाले आफू जहाँ जुन अवस्थामा भएपनि मानव जातिकै सेवामा लागिरहेकाले गर्वअनुभूति भने गरिरहेको छु । संसारको जुनै पनि ठाँउमा भएर यो कोरोना भाइरस संक्रमण समयमा फ्रन्टलाइन वर्करका रुपमा सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुमा नमन गर्न चाहान्छु ।
अन्त्यमा म नेपालमा रहनुहुने म जस्तै पेशामा संलग्न नर्सहरुलाई यो भन्न चाहान्छु कि आफ्नो पेशा प्रतिको कर्तव्य कहिले नभुलौं । हामीलाई भगवानले मानवसेवाकै लागि खटाएर पठाउनु भएको हो । त्यसकारण आत्मबल उच्च राखेर व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पिपिई) लगायतका अन्य प्रयोग गर्नु पर्ने सामाग्रीको सहि ढंगले प्रयोग गरि मानवीय सेवामा लाग्न विशेष अनुरोध गर्दछु ।
अष्ट्रेलियामा स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैको हाडवर्क , सरकारको विशेष सतर्कताका र जनताले सरकारलाई दिएको साथकै कारण कोरोना संक्रमण बढ्न नसकेको हो भन्ने सबैमा जानकारी समेत गराउन चाहन्छु । अनि, कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म स्वास्थ्य विज्ञानमा ठूला ठूला प्रगति गरेका राष्ट्रका वैज्ञानिकहरुले समेत औषधी पत्ता नलाएकाले यसको औषधी भनेकै लकडाउनको पूर्ण पालना नै हो । अनि, कोरोना संक्रमण अन्त्य भई लकडाउन खुलेपनि केही समय घरबाट बाहिर ननिस्कनु होला । विश्वमा एक लाखबढीको ज्यान लिने कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बाँच्नु होला, अरुलाई पनि बचाउनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मेलबर्न , अष्ट्रेलिया
Previousअष्ट्रेलियामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि एक्स्पर्टद्वारा २ लाख डलरको सहयोग कोष स्थापना
Nextकोरोनाको जोखिम न्यून गर्दै पठनपाठन कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु
अष्ट्रेलियाको नागरिकता लिएर पुनः त्याग्न के गर्ने ?
१४ आश्विन २०७५, आईतवार ०१:०९
विदेशी कामदारमाथि शोषण गर्ने अष्ट्रेलियन कम्पनीलाई भारी जरिवाना
२६ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ०१:१९
आफैंले बोकेको बम विस्फोट हुँदा माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु
१३ असार २०७४, मंगलवार ०२:३९